Mattress ngaphandle kwemithombo yamaxabiso aphezulu | Irayisi
Eyona nto iphambili iPocket Spring Matress, izixhobo zendalo ezinjenge-temples yendalo, i-coconut fiber, umqhaphu kunye noboya bunika ukuthuthuzela nokutsala umswakama. Oku kunika indawo yokulala ethandekayo eneqondo elipholileyo nelipholileyo.
Imodareyitha ePhucukileyo yePokotho yasentabeni
E-rayson, ukuphuculwa kwetekhnoloji kunye nezinto ezintsha ziingenelo zethu eziphambili. Ukususela oko kusekwe, sigxile ekuphuhliseni iimveliso ezintsha, ukuphucula umgangatho wemveliso, kunye nabathengi. Umatrasi ngaphandle kwemithombo sinabasebenzi abaziingcali abaneminyaka yamava kwishishini. Ngabo ababonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kubathengi kwihlabathi liphela. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga ne-Mattress yethu entsha ngaphandle kwemithombo okanye ufuna ukwazi ngakumbi ngenkampani yethu, zive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Iingcali zethu zingathanda ukukunceda nangaliphi na ixesha Iipropathi zeendwangu ezinje ngobukhulu, ubukhulu, kunye ne-sarn twist zonke ziphuculwe kuzo zonke ii-Istaff.